ZoomInfo: Gcina Idatha Yakho Ye-B2B Ibuyekeziwe | Martech Zone
ZoomInfo: Gcina Idatha Yakho Ye-B2B Ibuyekeziwe
NgeSonto, Septhemba 15, 2013 Douglas Karr
Ingcosana yemininingwane yakho ye-B2B iphelelwe isikhathi. I-Zoominfo ibika ukuthi i-70% yayo yonke idatha ye-B2B izoba noshintsho olulodwa noma eziningi phakathi nonyaka. Ingeniso yabasebenzi, ukukhushulwa, ukuthengwa, ukuvalwa kwebhizinisi… konke kungashayela ikhwalithi yedatha yakho yokubheka phansi. Lezi zinkinga zedatha zingadala izinkinga kukho konke ukuthengisa nokumaketha. Ekuthengiseni, uma iqembu lakho eliphumayo lishayela noma lithumelela abantu i-imeyili ukuthi abasekho, isikhathi sokumosa. Kokumaketha, ukuba ne- Izinkinga zedatha zingadala ukuthi ukulethwa kwe-imeyili yakho kwehle, okwenza kube nzima kakhulu ngama-imeyili akho ukukwenza ebhokisini lokungenayo esikhundleni sokubanjwa ngezihlungi zogaxekile.
Ingakanani imininingwane yakho yesikhathi esiphelelwe yisikhathi noma engaphelele? Vumela I-Zoominfo hlaziya i-database yakho, uvule amathemba akho amahle, ubuyekeze konke bese uguqula uhlobo lwakho lwesidingo lube ngumshini wokushayela imali.
Umtitilizo Wezinsizakalo Zedatha kaZoominfo
Ubunhloli beDatha - ukuhlaziywa okujulile kwe-automation yakho yokumaketha noma i-CRM database ukuze uthole ukuqonda okudingekayo ukukhulisa ibhizinisi lakho. I-Zoominfo inikeza inhlangano yakho izincomo ezingahle zenziwe ukuze kuthuthukiswe impumelelo yemikhankaso yakho.
Ukuphathwa kwedatha - Idatha ye-CRM iguquka njalo. I-Zoominfo ingasusa imininingwane ephelelwe yisikhathi, ihlaziye amakheli e-imeyili ukuze ikwazi ukuletha, ithole amathemba amasha, ivuselele futhi igcwalise amarekhodi, ingeze abenzi bezinqumo, idale ukuhlukaniswa okuhlosiwe futhi inikeze ngezibuyekezo eziqhubekayo.
Okwenzelwe ochwepheshe namabhizinisi amancane, okunikezwa yiZoominfo I-Zoominfo Xhuma. Joyina i-ZoomInfo Connect ukuthola ukufinyelela ku-database esesikhathini futhi ekhula ngokushesha ye-B2B, enemininingwane eningiliziwe yosomabhizinisi abangaphezu kwezigidi ezingama-65 namabhizinisi ayizigidi eziyisithupha.
IZoominfo nayo inikela I-Zoominfo Pro okubandakanya amaphrofayli aqinisekiswa njalo - ahlanganisa ochwepheshe abayizigidi ezingama-65 namabhizinisi ayizigidi eziyisithupha. I-Zoominfo Pro ikuvumela ukuthi ukhombe ngokunemba okumangazayo futhi ufinyelele kokungenzeka kakhulu ekuthengeni amathemba.
I-Zoominfo Community Edition
Kumabhizinisi amancane angenaso isabelomali, I-Zoominfo futhi ine-Community Edition lapho ungajoyina khona abasebenzisi abangaphezu kwe-100,000 ZoomInfo ababelana ngokuzenzakalela oxhumana nabo bebhizinisi ukuze bathole ukufinyelela kwamahhala ku-ZoomInfo.
IZoominfo iphinde inikeze i-API!
Tags: b2bidatha ye-b2bzoomfoUhlelo lomphakathi we-zoominfozoominfo xhumaizinsizakalo zedatha ye-zoominfozoominfo pro
Ongakuzwanga ku-Apple Keynote: iBeacons
Sebenzisa: Ungalokothi Uphuthelwe Yinkomfa